डा. एपिजे अब्दुल कलाम फाउन्डेसनका पदाधिकारी सम्मानित – अली मियाँ लोक वाङ्मय प्रतिष्ठान
खिमबहादुर गन्धर्वलाई हरिदेवी कोइराला संगीत सम्मान पुरस्कार
पुराना गन्धर्ब गायक खिमबहादुर गन्धर्ब र डा. एपिजे अब्दुल कलाम पाउन्डेसनका ३ पदाधिकारी आइतबार एकसाथ सम्मानित भए । हरिदेवि कोइराला साहित्य संगीत सम्मान कोषले खिमबहादुरलाई हरिदेवी कोइराला संगीत सम्मान पुरस्कार २०७५ प्रदान गरेको हो । पुरस्कारको राशि १५ हजार नगद र ताम्रपत्र छ ।
नेपाली भाषाका लोककवि अली मियाँको स्मृतिमा गठन भएको अली मियाँ लोक वाङ्मय प्रतिष्ठानले भारतका पूर्व राष्ट्रपति एपिजे अब्दुल कलामको स्मृतिमा गठन भएको डा. एपिजे अब्दुल कलाम पाउन्डेसनका ३ पदाधिकारीलाई पोखरामा स्वागतसहित सम्मान गरेको हो ।
फाउन्डेसनका अध्यक्ष वद्रिविक्रम थापा, संस्थापक सचिव डा. अब्दुल खलिक र सांस्कृतिक सचिव दिलीप थापा कार्यक्रममा सम्मानीत भए । संस्थापक सचिव खलिकले सम्मानले यस्ता कार्यक्रमले सांस्कृतिक आदानप्रदान र २ देशको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने विचार राखे ।
प्राज्ञ हरिदेवी कोइरालाले स्रष्टालाई उत्साह थप्न यस प्रकारका कार्यक्रम गरिरहेको बताइन् । अली मियाँ लोक वाङ्मय प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हनिफ मियाँले २ देशको सम्बन्ध र साहित्यको उत्थानका लागि यस्ता खालका कार्यक्रमलाई संस्थाले प्राथमिकता दिएको बताए ।
फाउन्डेसनका पदाधिकारी सोमबार कविशिरोमणि जन्मस्थल अर्घाैअर्चलेमा आयोजना गरिने वृक्षारोपणमा सहभागी हुनेछन् । सोही समारोहमा नेपाली लोक संस्कृतिको संरक्षणमा योगदान गरेकोमा हिमाली सांस्कृतिक परिवार, राष्ट्रिय लोक भजन चुट्का संरक्षण प्रतिष्ठान नेपाल कास्की र रामबजार पुन समाजलाई सम्मान गरियो । कार्यक्रममा अली मियाँ लोक वाङ्मय प्रतिष्ठानका सचिव पद्यराज ढकाल, कोषाध्यक्ष तुलसी प्रवास र साहित्यकार ताराप्रसाद तिमिल्सिनाले पनि बोलेका थिए ।
कार्यक्रममा डा. जगन्नाथ रेग्मी, केआर ढकाल, तर्कना शर्मा, किशोरदत्त बराल, शंकर ज्ञवाली, इन्द्र राना प्रतीक, गेहेन्द्रभूषण पोखरेली लगायतले कवितावाचन गरेका थिए । कार्यक्रममा हिमाली सांस्कृतिक परिवारले कौरा र झ्याउरे नृत्य देखायो । रामबजार पुन समाजले पुख्र्यौली नाच र राष्ट्रिय लोक भजन चुट्का संरक्षण प्रतिष्ठान नेपाल कास्कीले भजनबाट दर्शकलाई मन्त्रमुग्ध बनाए ।
Tags: alimiya, apj abdul kalam, haridevi koirala
राजाकै विरोधमा गीत सुनाए, पुरस्कार लत्याइदिए
अनिष भट्टराई पोखरा : लमजुङ करपुटारमा ४५ वर्षीया महिलाले ५ जना पुरुषलाई एक्लैले दोहोरीमा हराइन् । जित स्वरुप उनले ती पाँचैजनालाई …